Uqoqosho lwesikali: yintoni, ziimpawu, zisebenza njani kunye neentlobo | Ezezimali
Khawufane ucinge ukuba unayo inkampani ethile. Kwaye ngequbuliso, endaweni yokuvelisa iziqwenga ezili-100 ngosuku, unesigidi. Ngokucacileyo, njengoko uvelisa ngakumbi, iindleko zezinto ezibonakalayo ziya kuba sezantsi, kuba uya kuthenga ngakumbi. Kodwa xa kuziwa ekuthengiseni iimveliso zakho, uya kuyenza ngexabiso elifanayo. Kwaye ngokuthengisa ngaphezulu, uya kufumana izibonelelo ezinkulu phantsi kweendleko ezisezantsi, uyaqonda? Ewe, loo mzekelo sikunike wona yinto eza kuba luqoqosho lwesikali.
Ukuba ufuna funda ngakumbi ngoqoqosho lwesikali, iintlobo ezikhoyo, ezisebenza ngayo kunye neminye imiba yale nkqubo yezoqoqosho, emva koko siza kuthetha ngeenkcukacha ezingaphezulu.
1 Yintoni uqoqosho lwesikali
1.1 Uqoqosho lwesikali okanye uqoqosho lwesikali
2 Iimpawu zoqoqosho lwesikali
4 Iindidi zoqoqosho lwesikali
4.1 Uqoqosho lwangaphakathi lomlinganiso
4.2 Uqoqosho lwangaphandle
Yintoni uqoqosho lwesikali
Uqoqosho lwesikali lunokuchazwa njenge imeko apho inkampani inyusa imveliso kwaye inciphisa iindleko. Ngamanye amagama, sisicwangciso esizama ukunciphisa iindleko kunye nenkcitho ukuya kuthi ga, kwaye, ngenxa yoku, yonyusa ukusebenza kwenkampani, isenza imveliso ibe nkulu.
Ngoku, kufuneka kuqondwe ukuba isibonelelo sokwehliswa kweendleko ayisiyiyo kuphela into yokuba izinto ezingavuthiweyo zithengwa zitshiphu ngokwandisa ivolumu yazo, kodwa kungenxa yokuba isixhobo okanye isixhobo esithengiweyo sisetyenziselwa ukuxhaphaza kangangoko kunokwenzeka.
Umzekelo, cinga ukuba wenze utyalo-mali kumatshini. Indlela yokuyihlawula ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka kukuvelisa ngakumbi ngayo. Okukhona unokuvelisa, kwakamsinya uyakuphela ubhatalela umatshini, kwaye emva koko uyakuqala ukwenza iingeniso 'ezicocekileyo'.
Uqoqosho lwesikali okanye uqoqosho lwesikali
Wakhe weva ngomhlaba wezoqoqosho? Uninzi lucinga ukuba omabini la magama ayafana, kodwa inyani kukuba awafani.
La Uqoqosho lwesithuba lubhekisa kwimigca eyahlukeneyo yemveliso yenkampani. Ngamanye amagama, ziindlela ezahlukeneyo oya kuthi uvelise ngazo imveliso. Ukuba nayiphi na le mizila yemveliso ayisebenzi, iyavalwa okanye incitshiswe ukuze inyuse imveliso kwezinye ezaziwayo ukuba zinenzuzo.
Iimpawu zoqoqosho lwesikali
Emva kwento esikuxelele yona, siyabona ukuba uqoqosho lwesikali luphawulwa:
Ukuncitshiswa kwendleko zeyunithi zeemveliso. Ngamanye amagama, isiqwenga ngasinye esenziwa yinkampani sinexabiso X. Ukuba imveliso iyenyuka, loo ndleko iyehla, kuba njengoko imveliso inyuka, iindleko ziya kuncipha.
Inokwenziwa kuphela kwiinkampani ezinkuluNgokukodwa bajongana notyalo mali olukhulu kwaye izibonelelo zabo azikho kwixesha elifutshane, kodwa kwixesha eliphakathi nelide.
Ukuphucula isivumelwano phakathi kwababoneleli. Nangona kusithiwa ukuncitshiswa kwexabiso lezixhobo zokwenza imveliso akuchaphazeli, kuyenzeka ngoba, ngokuba nomthamo ophezulu wevolumu, evumela abavelisi ukuba behlise amaxabiso ezinto, ngalo ndlela iindleko zemveliso iya kuncitshiswa. Umzekelo, ukuba izinto ezingafunekiyo zibiza i-euro enye, kodwa endaweni ye-100 uthenga isigidi, kusengqiqweni ukucinga ukuba ixabiso liza kwehla, umzekelo ukuya kwiisenti ezili-10, ukonga iisenti ezingama-90 ngeyunithi.
Kukho ukuzithemba okukhulu. Ukhuphiswano ngakumbi (kuba awufuni ukuba imveliso inyuke kwaye ngale nto ungakhonza abathengi bakho ngokukhawuleza), oku kuyakwenza ukuba abatyali mali bakuphawule, kwaye xa u-odola iimveliso, bacinga ngawe kuqala kuba uyakhawuleza.
Nangona uza kuba sele unombono wendlela uqoqosho lwesikali olusebenza ngayo, akulimazi ukuba ume kancinci ngeli xesha uthethe ngalo. Oku ikakhulu kusekwe kwiindleko ezizinzileyo kunye nenqanaba lemveliso. Injongo kukunciphisa ezi ndleko zisisigxina ziye phezulu kwaye, ukwenza oku, ukwandisa umgangatho wemveliso. Ke, isiphumo esifikelelweyo kukuba iimveliso ezininzi ziyafumaneka, kodwa ngexabiso eliphantsi (ngokucacileyo ngaphandle kokuphulukana nomgangatho wento eyenziweyo).
Yiyo Ukhuphiswano olunokuthi lukwazi ukufikelela kwiinkampani ezinkulu kuphela, Ukudlala ngexabiso eliguqukayo (iindleko zempahla eluhlaza ukwenza iimveliso).
Ukwenza oku, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba kufuneka ibe yimveliso enokuthengiswa ngokukhawuleza, okanye ubuncinci ayithethi ukuba nendawo yokugcina izinto izele ziinxalenye ezinokuthi, nangaliphi na ixesha, zonakalise okanye “ziphelelwe lixesha ”. Ngesi sizathu, xa kufikwa ekuphakamiseni esi sicwangciso-qhinga, kubalulekile ukuba wazi iziphumo ezahlukeneyo zaloo mveliso wongezelelweyo uveliswayo.
Iindidi zoqoqosho lwesikali
Ngaphakathi kuqoqosho lwesikali kufuneka ukhumbule ukuba akukho nye, kodwa ziindidi ezininzi. Ngokukodwa, kukho oku kulandelayo:
Uqoqosho lwangaphakathi lomlinganiso
Yiyo eyenzekayo kwinkampani enye. Ngokwenyani, yeyona yaziwayo kuba le nkqubo yeyona isetyenziswa ziinkampani ezinkulu, okanye ezo zinemveliso yeenxalenye okanye zezinto ukubonelela ngamacandelo ahlukeneyo, azenzileyo.
Ngokwesiqhelo esi sicwangciso siyaphunyezwa kwinkampani, phantse ihlala isebenzisa iindlela ezintsha zokuvelisa ngenjongo yokusebenzisa olona tyalo mali luncinci ukutshintshisa imveliso enkulu.
Izalwa ngezinto zangaphandle, ngamanye amaxesha ezingahambelaniyo nenkampani uqobo, njengobungakanani beshishini. Phakathi kwezinto ezinokuthi zichaphazele indawo, ezentlalo, ezopolitiko, ezoqoqosho, inkcubeko ...
Umzekelo, ngaphakathi koqoqosho lwangaphandle lwesikali ingayirhafu inkampani enayo kwilizwe elithile, okanye indlela yokuhlawula irhafu kwelo lizwe. Ukuba kwenye kubiza ixabiso eliphantsi, kwaye ngayo uya kunciphisa iindleko, eyona nto ikhuselekileyo kukuba ufudukele apho unokufumana khona ezona zibonelelo zikhulu.
Ngoku, oku kuya kujonga kwicala "elingalunganga", kuba kukho into elungileyo (izixhobo zonxibelelwano ezingcono, izinto zokwenza izinto, iindlela zokusasaza) ezizezangaphandle kodwa ezinefuthe kwinkampani.
Ngoku ukuba uluqonda ngcono uqoqosho lwesikali, uyazi naziphi na iinkampani ezinkulu ezenzayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Uqoqosho lwesikali